တိဘက်ဒေသ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သည် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဒေသများအနက် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း တိဘက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ Shannan စီရင်စုရှိ Yarlung Zangbo မြစ်တစ်လျှောက် သစ်တောများ ဖုံးလွှမ်းနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
လာဆာ ၊ ဇွန် ၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း တိဘက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကောင်းဆုံးနေရာများအနက် တစ်ခုအပါအဝင်အဖြစ် ဆက်လက် တည်ရှိနေပြီး ပြီးခဲ့သောနှစ်တွင် တည်ငြိမ်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အရည်အသွေးအား ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း ယနေ့ ဇွန် ၃ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရ သိရသည်။၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း အဓိကမြစ်များ နှင့် ရေကန်များ၏ ရေအရည်အသွေးသည် ကောင်းမွန်မှုရှိနေဆဲ ဖြစ်ပြီး ဒေသ၏ လေထုအရည်အသွေးသည် ကောင်းမွန်မှု ဆက်လက်ရှိနေကြောင်း ဒေသ၏ ဂေဟဗေဒ နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဌာနက ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ကုန်တွင် တိဘက်ဒေသသည် စုစုပေါင်း ဧရိယာ ၄၁၂,၂၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာရှိသည့် ဘေးမဲ့တော ၄၇ ခုအား တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယင်းသည် ဒေသ၏ စုစုပေါင်း သုံးပုံ-တစ်ပုံကျော် ရှိကြောင်း သိရသည်။
တိဘက်ဒေသ၌ ရှားပါးပြီး မျိုးသုန်းရန် အန္တရာယ်ရှိသော တောရိုင်းအပင် မျိုးစိတ် ၂၁၄ ခုကို တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ မျိုးသုန်းပျောက်ကွယ်မည့်အန္တရာယ်ရှိသည့် မျိုးစိတ်များအဖြစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှု သဘောတူညီချက် နောက်ဆက်တွဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ကာကွယ်ထားသည့် တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်အများစု၏ ပေါက်ဖွားမှုသည် ပြန်လည်တိုးလာခဲ့သည်ကို တွေ့မြင်ရကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ (Xinhua)
LHASA, June3(Xinhua) — Southwest China’s Tibet Autonomous Region continues to be one of the best places in the world in terms of environment, maintainingastable environmental quality last year, according toareport released Thursday.
The water quality of major rivers and lakes remained good while the air quality of the region continued to be excellent in 2020, noted the report compiled by the region’s ecology and environment department.
By the end of 2020, Tibet had built 47 nature reserves measuringatotal area of 412,200 square km, which accounts for more than one-third of the region’s total.
A total of 214 species of rare and endangered wild plants in the region are listed in the appendix of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, the report noted, adding that the majority of the protected animal species has seenasignificant recovery in their population. Enditem
1. Aerial photo taken on June 27, 2020 showsashelter forest along the Yarlung Zangbo River in Shannan, southwest China’s Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Jigme Dorje)